Ku samee baloog marka ay farahaaga ku dheggan yihiin | Polyblog
Ku samee baloog marka ay farahaaga ku dheggan yihiin
Polyblog wuxuu kaa caawinayaa inaad si sahal ah u abuurto Blog ku hadla luqado badan oo aad ku kori karto meheraddaada suuqgeynta nuxurka.
Waa maxay sababta loo isticmaalo polyblog?
1. Dhakhso iyo Fudud
Xawaaraha iyo hufnaanta ayaa muhiim u ah ganacsi kasta. Waan fahamsanahay taas oo sidaas darteed waxaan dhisnay madal dardargelinaysa dhammaan habka suuq-geynta macluumaadkaaga.
2. U turjun nuxurkaaga si fudud
Beegso waddan kasta iyo luqad kasta oo kori ganacsigaaga si caalami ah. Adigoo adeegsanayna Nidaamka Maareynta Mawduucayada gaarka ah, waxaad si fudud ugu maamuli kartaa balooggaaga luqadaha badan hal dashboard hoostiisa.
3. Naqshadaynta ugu yar
Waxaan aaminsanahay fudayd. Taasi waa sababta aan uga dhigi doono blogkaaga mid nadiif ah oo fudud naqshad ahaan. Halkan waxaa ah muunad ku saabsan sida uu u ekaan doono balooggaagu marka aad ku dhisto Polyblog.
4. SEO la hagaajiyay
SEO waa aasaaska dhammaan dadaalka suuqgeynta macluumaadkaaga. Helitaanka taraafikada raadinta dabiiciga ah ee Google waxay muhiim u tahay baloog kasta. Taasi waa sababta aan ku bixinay kheyraad badan si aan uga dhigno boggaaga SEO saaxiibtinimo.
5. Martigelin si buuxda loo maareeyay
Looma baahna inaad wax ka qabato madax-xanuunka maamulida server-yadaada. Waxaan bixinaa martigelin shabakad aad u degdeg badan oo la isku halayn karo.
Qaar ka mid ah xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan suuq-geynta nuxurka
“77 boqolkiiba dadku waxay si joogto ah u akhriyaan blogyada internetka”
“Boqolkiiba 67 dadka wax qora ee maalin walba soo dhejiya waxay sheegaan inay guulaysteen”
“61 boqolkiiba dadka internetka isticmaala ee Maraykanka ayaa wax iibsaday ka dib markay akhriyeen blog”
1. Is diwaangeli oo habayn
Isku diwaangeli Polyblog oo ku xidh Polyblog mareegahaaga. Waxaad u baahan tahay inaad geliso cinwaankaaga iimaylka iyo boggaga internetka.
2. Ku dar maqaallo
Marka maqaalladaadu diyaar yihiin, waxaad ku dari kartaa balooggaaga adigoo isticmaalaya dashboardka Polyblog. Markaad daabacdo iyaga, macluumaadkaagu wuxuu si toos ah ugu socon doonaa bloggaaga.
3. La soco kobacaada SEO ee konsole raadintaada
Waxaan kuu daryeeli doonaa SEO-ga farsamada. Waxaanu si toos ah u soo saari doonaa khariidadaha goobta oo aanu ku shubi doonaa Google Search Console. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa la socoshada kobacaada Google Search Console.
Ma isticmaali karaa domain gaar ah?
Haa, waxaad isticmaali kartaa domain gaar ah dhammaan qorshayaashayada. Kaliya waxaad u baahan doontaa inaad ku dejiso boggaaga nidaamkayaga.
Waa maxay faraqa u dhexeeya Polyblog iyo nidaamyada kale ee maareynta nuxurka?
Polyblog waxaa si gaar ah loogu talagalay maareynta nuxurka luqadaha badan. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo suuqgeynta nuxurka luqadaha badan leh laakiin badanaa hirgelinta way adag tahay. Polyblog waxa ay ka dhigtaa mid aad u fudud in la maareeyo oo kor loo qaado baloog ku hadla luqado badan.
Ma inaan u wanaajiyo bloggeyga xawaaraha bogga iyo qodobbada kale ee farsamada SEO?
Haba yaraatee, Polyblog waxa mar hore loogu habeeyay dhammaan qodobbada muhiimka ah ee farsamada SEO sida xawaaraha bogga, qaab dhismeedka isku xidhka, khariidadda goobta, sumadaha meta, iyo in ka badan.
Yaa Polyblog u ah?
Polyblog waxaa si gaar ah loogu talagalay kuwa bilowga ah ee raba blog degdeg ah oo ka jawaabi kara socdaalkooda suuqgeyneed ee bilowga ah.
Ma u baahanahay inaan rakibo plugins iyo mawduucyada?
Polyblog waxay horey ula timid mawduuc nadiif ah oo jawaab celin leh iyo dhammaan sifooyinka aad u baahan doonto waa la sii rakibay. Sidan ayaad isla markiiba ku bilaabi kartaa balooggaaga oo si cad u diiradda saara daabacaadda waxyaabo tayo sare leh adoon aad uga welwelin farsamada.
Ma i tusi kartaa tusaale baloog lagu dhisay Polyblog?
Hubaal, hubi blogga mid ka mid ah macaamiisheena ugu sarreeya: https://www.waiterio.com/blog
Noogu soo qor oo kaliya dheh Salaan